Namuhla, ukuthandwa okwandayo zombuki atholwe nokuzidela, lapho kugcizelelwa ubuciko ethile bokulwa. Ngokuyinhloko, kungokwakho izingcweti empumalanga ngubani ngobuciko zingahlangana oyibamba yakhe umdlalo nge ezindabeni zezempi. Ayikho ngaphandle futhi filipp Ri - American umlingisi, screenwriter, umqondisi kanye umkhiqizi. Kodwa ngubani lo muntu eyingqayizivele?
Kudabuka khona umlingisi e-South Korea 7 Septhemba 1960, nakuba ukhule futhi siyaqhubeka abangabafelokazi bahlala edolobheni US eLos Angeles. Philip uPapa wasebenza ukuqeqeshwa kusukela besebancane, ngoba wayeyingcweti karate. Ngalesi Rea has manje ibhande degree kuqala Kendo, third-degree ibhande Hapkido nebhande elimnyama e Taekwondo. Kodwa filipp Ri ngaphezulu kusukela esemncane Wayefisa ukuba kumdlali ...
Ngokushesha starlet wahlangana umkhiqizi P. Strauss nekucala kancane ujike njalo zenze amaphupho azo ngokoqobo, lunendima eyinhloko esithombeni sebhayisikobho ekhuluma "Kuhle we Kuhle." Le filimu kwaba yimpumelelo yokuthi maduzane uzoqala ngokudubula ukuqhubeka yayo ngaphansi kwesihloko esithi "Okuhle Kuhle 2:. Battle eColiseum" Le filimu iye yabangela okungenani injabulo anolaka umbukeli, kokubili e-US nasemhlabeni jikelele. Ngenxa yalesi impumelelo, Fillip Ri waba umlingisi, owaziwa emazweni amaningi.
Namuhla filipp Ri neze sikhishwe esikhathini izindima phambili. He qamba amafilimu nezinhlelo ze-TV ukuze kubukwe umndeni. Lapho uqiniseka ngokujulile ukuthi ifilimu unekhono okuthonya izingqondo zabantu, futhi i-movie enhle uyakwazi ezikhandla nethonya ezuzisayo phezu asemasha, efundisa nokuziphatha kwakhe futhi kuvumelana kwalo.
Filipp Ri izinkanyezi ku-movie amaningi ukuthi uyakuthanda izethameli kakhulu kangangokuba sibuyekezwe ngaphezu kwesikhathi esisodwa. Yena kahle ukudlalwa mafilimu: "Solyanka e kentuyski" (1977), "Furioso" (1984), "Insimu Ninja" (1985), "Iselelesi umbulali" (1985), "Isihogo Squad" (1986), "Thulile ngababulali! "(1988)," Kuhle we Kuhle "(1989)," Kuhle we Kuhle 2: empini i eColiseum "(1993). yekhono laKhe directorial akubonisa lokho ngesikhathi ngokudubula amafilimu ezifana "Kuhle we Kuhle 3: Ayikho Ukuvula Emuva" (1996) kanye "Kuhle we Kuhle 4: Ngaphandle kwesixwayiso" (1999). Zonke umsebenzi umlingisi kanye nomqondisi zinezigcawu karate futhi karate. La mafilimu kungafiseleka kubuketa kaningi.
Filipp Ri, ogama biography kuyathakazelisa ngokwanele, namuhla indoda umkhaya ophumelelayo. Umkakhe, Emmi Ri, isekela umyeni wakhe kukho konke emitameni futhi kuyamsiza ukufundisa intsha ukuthula kwangaphakathi ngokuvumelana ngamabhayisikobho. Futhi umlingisi akusho ukukhangisa ukuphila kwakhe siqu, njengoba umuntu uthobekile futhi akathandi ukuba umphakathi eliphezulu. Ethanda ukuchitha isikhathi nomkhaya wami, ecabanga ngokuba futhi philosophizing.
Filipp Ri has a lot of abalandeli emhlabeni wonke. Ngenxa yalesi umlingisi izilaleli esiyingqayizivele ngezwa ngalokhu isiko lasendulo ka naseJapane, yena awudluliselayo karate komabonakude. Futhi ngisho noma namuhla akabe ukudlala indima ekulu movie, kodwa kwenza kuyinto enhle ngoba likufundisa intsha ukuhlala kuleli zwe eliyinkimbinkimbi, awusebenzisi amandla ento edaliwe futhi amandla omoya nobuhle bangaphakathi.
Rea elisetshenziswa amabhayisikobho akhe amasu Hapkido Ifundisa abantu ukuba bahloniphe umyalelo nobulungisa, ukudweba amandla kusuka nemvelo, ukuze nesifiso afeze konke nje indlela engcono kakhulu. Philip lisifundisa ukuhlonipha abanye abantu, kulesi simo sibe nesizotha.
Kunoma ibhizinisi, okuyiwona filipp Ri athathwe, ukugcina isiko lakubo, lapho lihlukile umuntu isiko elinjalo. Futhi kuyahluka ikakhulukazi ukuthi kulingisa eminye yemiphumela engqondweni. Izinhloso UFiliphu ubeka yena okusezingeni eliphezulu, ngokungafani kuya labo abakhetha ukuya zamanga.
Namuhla, intsha azisetshenziswa ukuzibekela imigomo futhi ukuzindla ngendlela ukuyifinyelela ngayo. Lapho ama-movie wakho lifundisa ukuthi inkinga kumele imiswe ukuphila, ngoba isikhathi basheshise ngokwanele. Futhi injongo yale kuyadingeka Kunoma yikuphi, hhayi kuphela e-karate.
Beautiful TV umethuli Olga AbakwaMara babe sebethuthela
Alexey Uchitel, umqondisi: Biography, empilweni yakho, ama-movie